”Waxaan xitaa ka yaabin doonnaa taageerayaasha AC Milan” – Milkiile Yonghong Li + Sawirro – Gool FM
”Waxaan xitaa ka yaabin doonnaa taageerayaasha AC Milan” – Milkiile Yonghong Li + Sawirro
Raage July 16, 2017
GUANGZHOU (CHINA) 16 Luulyo 2017 – Taageerayaasha AC Milan ayaa markan xaq u leh inay riyoodaan, maaddaama ay heleen malaayiin ay suuqa ku kharash garayn karaan.
Kooxda ayaa ilaa haatan kharaj garaysay lacag ka badan 200 milyan oo euro oo ay kusoo qaateen koox idil oo ay ka mid yihiin sida Bonucci, Conti, Biglia, Kessie, Calhanoglu iyo André Silva balse halkaa kuma hakan doonaan.
Milkiilaha cusub ee Rossoneri, Yonghong Li, oo ka hadlayay xaflad lagu qabtay magaalada Guangzhou oo haatan ku sugan tahay kooxda Vincenzo Montella oo isu diyaarinaysa ciyaaro ay halkaa kusoo ciyaarayso ayaa yiri sidatan:
“Isla maalintii koowaadba waxaan wax usoo iibinayay kooxda Milan,” isagoo raaciyay: “Dib baannu annagoo xooggan ugu soo laabanaynaa Talyaaniga & Yurub, waxaannu xitaa ka yaabin doonnaa taageerayaasheenna.”
Marco Fassone oo ah guddoomiyaha cusub ee AC Milan oo hoowsha kala wada ayaa laftiisu sheegay inay ciyaartooy badani soo wacayaan kuwaasoo wax ka waydiinaya mashruuca cusub ee Rossonerri isagoo sheegay inay doonayaan inay kordhiyaan dakhliga kooxda ee dalka Shiinaha oo aad looga taageero.
Waa kuwee 5-ta kooxood ee loogu iibsiga badan yahay funaanadohooda + Sawirro
JAWAABTA JUVENTUS: Juve oo wada doonaysa Manuel Locatelli & Mattia De Sciglio! (Milan maxay ka tiri?)